Martyn Ashton ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ọnwụnwa ịnyịnya ígwè - ihe ngwọta na
Ọnwụnwa ịnyịnya ígwè - ihe ngwọta na
Martyn Ashton ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ?
Ntughari: Almudena Torrecilla Onye nyocha: David DeRuwe Obi dị m ụtọ. M nwere nnukwu akụkọ m ga-agwa gị taa. Echere m na ọ dị jụụ ma na-atọ ụtọ, mana ọ dị nwute na m ga-amalite ya na foto a, ọ bụghị oge dị jụụ.
Ọ dị mma, mana anyị ga-eme ihe ngosi gosiri ebe a afọ anọ gara aga. Adịla m ọkachamara n'ịgba ugwu ruo afọ 25. Ma foto a - obere oge ka e mesịrị, enwere m ọdịda.
Na n’oge mgbụsị akwụkwọ ahụ, enwetara m ọnya ọkpụkpụ azụ, nke na-emebi ọrụ m. Mana gịnị ka m ga - eme iji mee ka nke a na - aga, na - atọ ọchị ma dị jụụ, nri? (Ọchị) Anyị ga - awụlikwa elu otu elekere na foto ahụ ebe m chere na ọ bidoro jụụ. Ọ D OK MMA, yabụ anyị ga-awụda oge ahụ siri ezigbo ike site na ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa na ọhụụ nke ihe nke a nwere ike ịpụta, ịnyịnya helikopta na-eme mkpọtụ, ruo otu awa site na ebe m nọ n'otu n'ime nyocha ndị MRI ahụ, otu n'ime ndị ahụ tunnels claustrophobic.
Na nke mbụ ya kemgbe ihe mberede ahụ, anọ m naanị m, ndị ndọta ndị a gbara m gburugburu. Emechara m nọrọ ebe m ga-eche. Kedu nke na-eme? M ga-emekwa ihe n’eziokwu, anọ m n’oké ihe mgbu n’úkwù m.
M bụ ụdị nke-enwe mmetụta ọsọ ọsọ. enweghị m ike ịnụ ihe ọ bụla n'okpuru. Enweghị m ngagharị ọ bụla na ọ tụrụ egwu.
Ekwuru m na nke a ga-atọ ụtọ ma dị jụụ? (Ọchị) Ọ ga-atọ ụtọ ma dịkwa jụụ. Mana ikwu eziokwu, a nọ m n’ọgba aghara. Echere m ihe niile ị ga-atụ anya ka mmadụ chee na ọnọdụ a.
Kedu ka m ga-esi rụọ ọrụ? Know ma na agaghị m agagharị ọzọ n’oche nkwagharị. Olee otú m ga-esi bụrụ ezigbo nna? ịbụ ezigbo di? Ihe niile ahụ. Mana ekwesịrị m ịnakwere ihe taa nke m na-agwabeghị ọtụtụ mmadụ.
N'okpuru ọgba aghara niile - amalitelarị m ịmụmụ ọnụ ọchị - n'okpuru ọgba aghara ahụ, enwere ezigbo obi ụtọ, nke na-ada ụda ọchị, ma buru m. N’ime ọgba aghara a niile, echere m ọnọdụ ole na ole, dị ka ịnọ n’oche nkwagharị? Kedu ka o si f bụrụ ụkwụ anyị buru ibu oge niile? Ihe niile ahụ. Mana ụbụrụ egwuregwu m na-asọ mpi malitere ịwụ elu ma amalitere m ịjụ, 'Ya mere, ọ bụ onye kachasị arịa ọrịa nchịkwa n'ụwa?' (Ọchị) 'Onye bụ onye a? ka obu nwanyi? Ọ ga-abụ onye mara ezigbo mma.
Kedu ihe bụ ọkwa ụwa nke paraplegia? Kedu ka esi abanye n'ime ihe ngosi 100 kachasị elu? “Enweghị m ike inyere ya aka; Eche m. Enwere m obi ụtọ ma mara ozugbo na ọ bụ ezie na ọ bụ echiche nzuzu, ọ dịkwa ezigbo uru. Enwere m ike ịnwe na ọ nwere ume, ọ nwere mmegharị, ọ dị mma.
M wee nye ya nri site n'oge ahụ gaa n'ihu, ejidesiri m ya ike. Ama m na ọ bụ oge dị m mkpa na m ji ike ahụ wee gaa n'ihu na ndụ m. Ka m kọwaa ihe kpatara m ji nwee obi ụtọ n'ihi na m na-agba ịnyịnya ígwè ogologo oge ma ọtụtụ oge enwere m obi ụtọ site na echiche.
Ọ bụ echiche dị ọtụtụ oge, dịka ị pụrụ ịhụ, nke ahụ nwere ike ọ gaghị adị mma. Peoplefọdụ ndị gbalịrị ka gị na onye nzuzu ahụ kwuo okwu! I nwere ike imerụ onwe gị ahụ́! ”Ma ọ bụ“ Enwere ike ijide gị maka ịkwọ ụgbọala n’ụzọ na-akwadoghị n’elu akwa mmiri! ”Na ihe ndị dị otú ahụ. Na obi ụtọ na ike ahụ m hụrụ na nyocha MRI, nke ahụ bụ ihe m ji merie olu dị n'ime a nke na-ekwu na ekwesịghị m na ndị mmadụ ga-asị m n'ụzọ anụ ahụ, 'Emela'.
Na m ga - eji ike ahụ - nke ahụ bụ nzuzu kachasị - m ga - eji ike ahụ mezuo ihe. Ya mere amaara m na ọ dị mkpa. Agara m ụlọ ọgwụ ruo ọnwa ise ka ihe mberede ahụ mechara.
Enwere m izu 12 izu ike, nke ahụ bụ ogologo oge ezumike. Nke a dị ka nke kachasị ogologo nke onye ọ bụla n'ime anyị chọrọ. Nke ahụ nwere ike bụrụ ụra kachasị ogologo n’ụlọ a. (Ọchị) Ọ bụla? Mba mba.
O doro anya na ụra kachasị ogologo. Anọkwa m oge a oge niile, na-agbake, m na-emekwa ihe ndị ọzọ m na-emebu n’oche ndị ngwọrọ. Anọ m na ngalaba na ọtụtụ ndị ọzọ nwere ọnya ọgbụgba na ịtụnanya na m hụrụ ndị mmadụ ndị a tụrụ m n'anya.
Naanị ndị nkịtị nwere nsogbu a na ndụ ha na-atụghị anya ya. Ọ dịkwa ịtụnanya ịhụ ka uche mmadụ a si na-abata wee chọta ụzọ ọ ga-esi laghachi ma gaa n’ihu n’ihe ndị nwere ike imebi emebi. O sitere n'ike mmụọ nsọ m site n'ike ahụ wee si n'ụlọ ọgwụ pụta.
Ya mere enwere m mmụọ nsọ wee pụta mantra m chere na ụlọ ọgwụ. Ejirila m ya ọtụtụ oge. Ọ bụ, 'Ọ bụrụ na m ga-akpọnwụ, mgbe ahụ enwere m ike ịnọ na ya. 'Enwere m ike ịbụ nke kachasị mma m nwere ike ịbụ.
Intobanye n'elu 100 bụ ihe m chere. Ọ malitere na ihe ndị bụ isi, ihe dị ka eskalatọ a. (Ọchị) Ọ dị ka nsogbu dị mfe, mana na oche ọlụsị onye na - ebugharị ebugharị dị mma, ị ga - eme ihe, ọkachasị ịgbada n'ihi na ị ga - agbadata otu ị si arịgo.
Yabụ ị nwere oge ahụ, 'Oh chim, enwere m olileanya na m kwuru eziokwu.' (Ọchị) Onye nche esoro gị daa. (Ọchị) (Olu siri ike) 'A gaghị ekwe ka ị nọrọ n'oche nkwagharị ebe a.' 'Ọfọn, abụghị m onye na-agba ọsọ.' (Ọchị) Ya mere amalitere m site na isi, mana dị ka m kwuru, m bụ n'ezie, achọrọ m ịdị mma na ya.
Echere m na m ga-ahụ egwuregwu m na egwuregwu ma jiri ụfọdụ ahụmịhe m nwetara na ọrụ m na-agba. Kedu egwuregwu m nwere ike ịnwale? Agbalịrị m ọtụtụ ihe. M na-agbalị handwheeling na m na-agba tenis.
Have hụla na ndị na-agba egwuregwu tennis na-ejide oche tennis ma na-akwagharị oche nkwagharị, nke bụ ihe abụọ, yabụ enweghị m ike ịme nke ahụ. (Ọchị) M kụrụ bọl n'otu ntabi anya. Kedu ihe ọzọ m gbalịrị? Agaba, m gbaliala basketball.
Enweghị m ike ịtụfu basketball tupu ihe mberede m, oche ahụ emeghịkwa ka ọ dị mma. N’ihi ya emeghị m ya. (Ọchị) Ma agbalịrị m ịgba ọsọ oche nkwagharị, ihe ị nwere ike ịhụ ebe a. Eleghị anya ị hụrụ nke a na Paralympics, na ịgba ọsọ ma ọ bụ London Marathon, ị hụrụ ndị a ma ha dị ịtụnanya.
Echere m na m nwere ezigbo ahụ ike ịnya ịnya. Echere m na nke a bụ ebe m ga-ahụ oge m. Nke a bụ naanị ụbọchị ịgba ọsọ oche ọlụsị na-agba ụbọchị naanị n'ihi na nke a bụ ọsọ 100 mita.
Foto a na-ewute m n'ezie. Ọ bụ ọsọ 100 mita. Abụ m onye ahụ nwere okpu ojii, obere akara na-acha ọbara ọbara na ya, uwe elu na-acha anụnụ anụnụ.
Adịla m njikere. Nwatakịrị nwanyị ahụ, nke nọ ya n'akụkụ, nwere okpu na-acha odo odo, nke na-acha odo odo na nke pink, pọpụl pọpụlụ 'na-acha odo odo', nke ziri ezi, “Ọ kụrụ m. Ọ dị afọ iri na abụọ. (Ọchị) Chere, chere! (Ọchị) Ọ kụrụ m ogige iri isii. (Ọchị) Ya mere gawa kayak! Iwu? Ọ bụ egwuregwu dị ezigbo mma! (Ọchị) M hụrụ foto a n'anya.
M na-agagharị na ịntanetị na-achọ ihe ọzọ mgbe ọgba tum tum na-agba ọsọ na ọdachi wee chọta kayak. Bogbọ mmiri ndị a dị ịtụnanya. Ha dị oke ogologo, dị warara ma dịkwa oke ọsọ.
Enwere m ike ịbanye na onye nkụzi nke ndị otu GB wee gwa m ka m mee nnọkọ ikpe. Anyị nwere ebe na otu ndị otu maka mmadụ. 'Kedu ihe ị na-amụrụ amụ? (Ọchị) Maka onye nwere nkwarụ m, a sị m, 'Nke a bụ ya.' N’ihi ya, m nyara ụgbọala gaa ogologo awa atọ, enwere m nnukwu obi ụtọ.
Agara m nwunye m Lisa, nwa m nwoke bụ Alfie bịara ịhụ ka a si họrọ papa m maka ndị otu. Ma ọ bụ oge mbụ m kayak. Ugbu a mgbe m banyere n'ụgbọ mmiri a, enwere m oge ụjọ n'ihi na, dịka m kwuru, ha mara mma ma na-echegbu onwe m.
Agwara m nwunye m Lisa, onye guzo n'akụkụ jett ahụ, 'know mara, enwere m obere nchegbu banyere ụgbọ mmiri a, ọ siri ike ịhazi. Achọrọ m ịkwọ ụgbọ mmiri. Onye na-enye ọzụzụ wee gwa m - ọ na - ejide ihu ụgbọ mmiri, n'akụkụ mmiri - wee sị, 'Echegbula onwe gị, ị na-edozi ya na isi gị.' Echere m, 'Ọ dị mma, ụfọdụ ozi dị oke mkpa dị na nkwukọrịta E-mail anyị furu efu n'ihi na enweghị m isi; (Ọchị) Ihe a bụ oche ọlụsị, ihe ziri ezi? Amaghị m ihe kpatara na ọ nwetaghị ya.
Mana ọ na-achụpụ m, OK? Ejikọtara m na ihe nnukwu Velcro fastener ka ị ghara ịpụ n'ụgbọ mmiri ahụ, m na-efegharị ntakịrị, na-ama jijiji ntakịrị ma mgbe ahụ ọ na-aga 'blum' n'ụzọ ọzọ, na m na-anọdụ ala n'ime ya , ịnọdụ ala n'ụzọ zuru oke, nri? Ma ala nke osimiri di n'ebe ahu, m na-agbada ala ma echere m, 'Oh, chi m', ana m ele apịtị na azụ. (Ọchị) Ana m agbalị ịdọpụta ihe Velcro n'úkwù m ka m wee si n'ụgbọ mmiri ahụ pụta, m jikwaa ịpụ apụ zuru ike, naanị ogologo oge iji hụ nwa m nwoke bụ Alfie ka ọ na - ele m anya dịka 'Papa na-eri mmiri' ( Ọchị) nke ahụ jọgburu onwe ya. M na-aga n'okpuru ọzọ.
Enweghị m ike ịpụ n'ụgbọ mmiri n'ihi ihe ụfọdụ n'ihi na ụkwụ m nwere ụdị jidere n'ụgbọ mmiri ahụ. Ya mere, ana m alụ ọgụ maka ọpụpụ m ma na-agbapụ ọtụtụ, anaghịkwa m ebili mmiri n'egwuregwu a dịka m mere atụmatụ. (Ọchị) Ọ bụ ọgba aghara, ọ dị mma? Ana m abanye na njedebe na otu ihe, ana m ajụ oyi na nke abụọ, enwere m mmetụta nzuzu.
Ana m ebupụ m na mmiri, ana m enwe ụdị iwe maka na m na-eme egwuregwu na-aga nke ọma. Ana m agbalịsi ike maka ya, ma ọ bụghị. Etinyeghachiri m n'ụgbọ mmiri.
Asịrị m, 'Tinyeghachi m n'ụgbọ a n'ihi na enwere m ike.' Ha weghachiri m azụ, m na-ese n'elu mmiri, ma eleghị anya ị chere ya, 'blum'. (Ọchị) Ọ bụ ihe egwu.
Agam esi na mmiri ozo puta, oyi ju m. Egbula kayak. ”(Ọchị) Abụghị m onye na-anya ụgbọ mmiri, Ọ D? MMA? M wee si na mmiri ahụ wee nwee mmetụta nke ihere na isi na obi ụtọ.
Nke ahụ abụghịkwa ihe m chọrọ. Ya mere, anyị nyara ụlọ nwayọ nwayọ, mana ọkara ụgbọ ala nwa m nwoke bidoro ịchị ọchị n'azụ ụgbọ ala ahụ. Asịrị m, 'Gịnị ka ị na-achị ọchị? 'O wee sị,' you hụrụ cafe ahụ n'akụkụ nri ebe mmadụ niile nọ n'ime na-a coffeeụ kọfị ma na-ekiri? 'M kwuru,' Ee, ee. ' O wee sị, 'Cheedị ụdị ihe nkiri ahụ dị ka ndị nọ ebe ahụ.' (Ọchị) 'Gini mere ha ji anọgide na-etinyeghachi Onye ogbenye ahụ?' (Ọchị) 'O doro anya na ọ gaghị emeli.' (Ọchị) jọgburu onwe ya! Ndị ọjọọ dị ka m, 'Etinyela m ọzọ n'ụgbọ mmiri.' Ha dị ka, 'Bata n'ụgbọ mmiri!' Egwu! Ị ma nke mere? Kemgbe ihe mberede m, enwebeghị ike ịgba ịnyịnya ígwè n'isi m.
Achọrọ m itinye nkà m n'ọrụ, mana echere m na ịgba ịnyịnya ígwè ga-anọ ebe ahụ. Amaghị m kpọmkwem otú ọ ga-esi mee, ma amaara m na m chọrọ ime ya. Nsogbu ya bụ na, ọ dịghị onye na-eme ya, ọ dịghị onye na-agba ịnyịnya ígwè nwere ụkwụ abụọ nwere ụkwụ mkpọnwụ.
Ọ naghị eme. Ya mere echere m banyere otu m ga - esi mee ya wee chọta azịza ya mgbe m hụrụ Sochi Paralympics. Amaghị m ma ọ bụrụ na ị hụtụla agbụrụ ndị a na-agba ịnyịnya na mgbe ahụ ha na-anọdụ n'ụdị oche ịwụ ahụ ma ha na-ejegharị na-agbadata ugwu ugwu snow na ndị nwere mkpọtụ n'akụkụ abụọ na obere skis na m lere anya ma chee, 'Gini mere onye a enweghi? You tinye otu n’ime oche ndị a n’elu igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu? Nke a bụ ihe m chọrọ, achọrọ m ihe ga - echekwa m na igwe kwụ otu ebe ma ozugbo m gbagoro, anyị ga - ahụ ya - ọ ga - adị mma. 'Amalitere m ịjụ ụfọdụ ndị nọ n'ụlọ ọrụ ahụ, sị,' Enwere m ike? Emere ya? 'Offọdụ n'ime ha kwuru, sị,' Ee, anyị nwere ike ime nke ahụ. 'Ndị ọzọ kwukwara, sị chere, chere obere oge, ịchọrọ ụdị pedal iji jide oge gị ma kwụsie ike na ihe ndị dị otú ahụ. 'Ihe bara uru, echekwara m,' Ee e, n'eziokwu, n'ihi na naanị ihe ọ na-ewe bụ ugwu na ike ndọda dị ka ike efu.
Ọ bụ 'eco', ọ dị ka 'ka anyị gawa.' 'Ha kwukwara ihe ụfọdụ banyere ịkwụsị. Echere m, 'Anyị ga-eme ya.' Ya mere, nke a bụ m, otu afọ na ọkara mgbe m nwesịrị ihe mberede, na ugwu m na ndị enyi m na ndị enyi m, enweghị m ike ịgwa gị otu ịtụnanya si dị, ọ dị m ka m na-akwọ ụgbọala m pals.
Mgbe m malitere ya dị ịtụnanya. Ihe dị ịtụnanya bụ ahụmịhe m na ndị enyi m nwere. Ọ bụ naanị otu ụbọchị mbọ ụbọchị gachara n'ihi na m mụmụrụ ọnụ ọchị nke ukwuu.
Ọ bụ ihe ịtụnanya na enwere m ike ịgba ịnyịnya ọzọ. Na ederede a nke anyị zitere na ịntanetị ma nweta ọtụtụ nde echiche na Youtube na Facebook na Instagram na ihe ndị ọzọ. Enwere oke mkpọtụ, n'eziokwu ekwentị m - enwetara m ọtụtụ ọkwa na ekwentị m na-akụ.
Emebiri m ekwentị m. Yabụ na m na-eche ọtụtụ nde echiche, ọ dị mma? 'Echere m na ndị a bụ 100 kacha elu' m ga-asị. 'N'uche nke m, etinyere m ya na ihe ngosi 100 kacha elu. “(Ọchị) you maara ihe dị mkpa na akụkọ m, echere m na… oge ahụ na nyocha MRI dị m ezigbo mkpa n'ihi na onye ga - eche tupu oge ahụ iji hụ m na mmerụ a, na ụfọdụ ụbọchị kacha mma ? nke m na-agba ịnyịnya ígwè n'ihu m.
Know mara na ọ bụghị njedebe nke ọrụ m, ọ bụ naanị mgbanwe. Ejegharịwokwa m ụwa kemgbe m nwesịrị ihe mberede. Anọla m na ihe omume mba ụwa Anọla m ebe ngosi akara ngosi nke m na-echetụbeghị mbụ ịnya ịnya ma nwee ahụmịhe dị egwu na igwe kwụ otu ebe.
Echeghị m na ọtụtụ ndị ga-asị na nke a na-abịa. Echere m na e nwere ozi dị mkpa n’ebe ahụ. Echere m na ọ bụ mkpali ahụ na ike ahụ mere ya n'ihi na nke ahụ bụ agụụ, ị mara, mgbe ị nwere agụụ maka ihe ịchọrọ ịme ya.
Are na-anụ ọkụ n’obi banyere ihe ịchọrọ ime na ndụ gị yana mkpebi ị chọrọ ime. Ọ dị mfe ịhapụ mgbochi nke ngọpụ na ngọngọ nke ihe kpatara na ị nweghị ike ma ọ bụ mee ihe mgbochi site na nkwarụ, mana mgbe ị nwere agụụ ahụ ma nwee obi ụtọ ahụ ma hapụ ya ka ọ gafere, ị nwere ike ịmepụta ụzọ gburugburu ihe mgbochi ndị a niile. Nwere ike mezuo nnukwu ihe ma chọọ m ya.
Daalụ nke ukwuu. (Aka) (tie aka)
Bikgbọ okporo ígwè dị mma maka ụzọ ụkwụ?
Martyn Ashton(a mụrụ na 2 Disemba 1974) bụ onye bụbu onye Britain na World ọkaibe ọnwụnwa ọnwụnwa ịnyịnya, stunt onye na onye njikwa otu.Ashtonbụkpọnwụrụna mberede na 2013, n’oge a ọgba tum tum ọnwụnwa ngosi na British Moto GP.
Ikekwe anyị enyebeghị anyịnya igwe ịgba ọsọ anyị zuru oke, ọ bụrụ na ị hụla agbụrụ StradaBianchi mara mma mgbe ahụ, ị ​​hụla ndị ọkachamara ka ha na-adọka ọmarịcha okwute Tuscan gravel nke ontali na ọgba tum tum ha na obere mgbanwe na obere nsogbu enweghị nsogbu. jiri ya chee Ajuju a, achọrọ m igwe eji ajị anụ ga-agba ịnyịnya gravel ma chọpụta ihe ị nwere ike na enweghị ike iwepụ? Aga m ewere igwe ọhụrụ Orbea Orcaroad nke m na-atụ na gravel njem, n'eziokwu, anyị na-agbago otu ụzọ ahụ mụ na Simon Richardson na-agba ịnyịnya mmiri America niile n'afọ gara aga, yabụ ka anyị wụba ma hụ ihe na - eme ebe a ugbu a na elu Massachusetts Nke a bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji kpọọ ụlọ na teknụzụ na m bụ n'ezie, m hụrụ ya n'anya ebe a mgbe m ga - abịa ebe a na ngosi sayensị na afọ gara aga, ọ bụ oge dị oke mma na taa, n'agbanyeghị na anyị na-ezere mmiri ozuzo ahụ, aga m egosi gị na ị ga-akụ ebe a ọkacha mmasị kachasị amasị m ma m ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ iji nweta gị gravel igwe kwụ otu ebe njem. Yabụ mgbe ị hụrụ ihe niile ahụ na Instagram na mgbasa ozi mmekọrịta, ị na-eso ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ịmara na ha na-agba ịnyịnya ígwè ha n'ụdị ọhịa ọ bụla ma ị chere na ọ bụrụ na ha nwere ike, gịnị kpatara na enweghị m ike ịsị na ọ bụ a gravel ụzọ igwe kwụ otu ebe ee, nke ahụ bụ eziokwu, ma i nwere ike adịghị mkpa a gravel igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ị maara onwe gị. Ugbu a, ka anyị kwenye na ị na-agba ịnyịnya a mara mma, ịnyịnya ígwè gị na-asọ n'akụkụ a wee gaa n'aka ekpe ị ga-ahụ ụzọ egwu egwu ị na-esiri ike ịlele ya ma ị kwuo ma ọ bụ na ị ga-asị mmadụ ma ọ bụrụ na ị kwuru ee mgbe ahụ ọ bụ ezigbo akara ịmara onwe gị na ị ga-etozu oke, ị ga - abụ onye isi, ị gaghị enwe njikwa, mana ọ bụrụ na ị dị ka m ma hụ ụzọ a ma ịmara, ah, enwere m ike ịkụ ya, m ga - emerịrị ya eme ihe ichotara ime ihe m kwesiri ime iji lee ebe o na-aga. a kpamkpam dị iche iche isiokwu Ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-amu amu, ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-elekọta gị igwe kwụ otu ebe, ọ bụrụ na ị maara na ị ga-agaghị agafe na ahịrị mgbe ahụ ị kwesịrị ị na-ezi udi na nke a, na na na akụkọ ihe dị ka otu awa Ọ bụrụ na ị na-echeta ihe niile America na-agba ịnyịnya na Psy na anyị malitere na Greenfield, Massachusetts na mgbe ahụ anyị gbagoro ebe a bụ n'ụzọ nkịtị otu n'ime ebe kachasị amasị m, anyị abanyelarịrị n'otu n'ime àkwà mmiri kpuchie naanị obere osimiri a na-eji mmiri ndị a Obere obere mmiri mmiri niile ọ na-agbada ọ na-erugharị ebe a enweghị mkpụrụ obi na-enye gị nsogbu ebe a, kedu m? ịhụnanya zuru oke na nke ahụ bụ gravel echekwara nke ọma, ọ bụghị nke na-agba ọsọ na igwe ịgba ọsọ na-eme nke ọma, ruo ugbu a, amaara m na ị ga-ajụ m otu anyị si mara ma ọ bụ gravel echekwara nke ọma, mana na mpụga Kamut enwere m azịza ya na ọ bụ nke a ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịkwọ otu n'ime ha- gafere ma ọ bụ agaghị agafe Nna m bụ akara mba ụwa ọhụụ mgbe ajịrịja ajị anụ okporo ụzọ okporo ụzọ, mgbe m kwuru banyere gravel nke ọma tupu anyị ahụ gị na gravel echekwabara nke ọma ụzọ, na obodo etinyela ọtụtụ okwute ebe a, mana okwute ndị a amalitela igwu ntakịrị, ịchọrọ nkume ahụ ka mmiri mmiri na ụzọ ya wee dịrị mma ma sie ike ka ha wee ghara inwe nnukwu olulu, mana ọ bụrụ na ị gafere ezigbo taya ma ọ bụ nrụgide dị elu ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ bụ naanị otu n'ime nkume ndị ahụ iji jide nke ahụ ga-enye gị ezigbo ntụtụ mgbe ihe ahụ dị n'okporo ụzọ gị dị ezigbo mma ị ga-eme ihe ndị anyị kwuru banyere Olee ihe enyemaka ma e nwere ụzọ ọzọ elu ebe a na i nwere ike tụgharịa aka ekpe na i t abughi udiri uzo m gha akwado maka igwe ugbo ala gi, karisia ma oburu na i nweghi otutu uzo ozo i malitere iburu apịtị na ihe di n'ime ya adighi nma, ya mere ka anyi lee ndi ahu anya. nke ahụ bụ gravel a na-edozi nke ọma, mana nke ahụ bụ nwoke aka ekpe m na-achọ dị ka ọganihu a na mberede na-agbanwe ma ị ga-ahụ na ọ bụ ọtụtụ aghụghọ aghụghọ nnukwu nkume apịtị enweghị ihe ọ bụla a na-elekọta nke ahụ bụ nke teknụzụ ka ọ ga-abụ ụzọ ọtụtụ iju on a igwe kwụ otu ebe maka a nnukwu njem ma na gị ọduọ anyịnya igwe m ga-asị Idon m na-echeghị na ọ ga-abụ na ukwuu na m na-agwa gị n'ihi nke a egwu mmuo m nwere na m ga-aga na ụzọ ụkwụ ndị a na enweghi otutu ndi otu ndi enyi enyi n'ihi na enwere otutu ndi gbajiri agbaji, yabụ ka anyi gwuo ihe karia ka anyi kwuo banyere otu n'ime ndi buru ibu, nke ahụ dịkwa mkpa ugbu a, ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ụzọ kwesịrị ekwesị, oleezi ihe na - egbochi gị bụ taya size ị na-etinye ebe a na ebe a na igwe kwụ otu ebe -Meting nwere ike dabara na ọ bụghị ihe niile agba na okpokolo agba na ihe ọ bụla nke mere na ị chọghị ịnya nnukwu taya mgbe ahụ ị ga-adabara igwe kwụ otu ebe n'ihi na mgbe ị biliri wee jee ije site n'akụkụ ruo n'akụkụ ọ na-ehichapụ etiti ahụ na nke ahụ agaghị adị mma maka onye ọ bụla ma ọ dị nwute ọ ga-emebi etiti gị ka ọ bụrụ nke kachasị maka okporo ụzọ kwesịrị ekwesị b Ọ bụrụ na ị nwere ike nnessee 28, ma eleghị anya 30 na igwe kwụ otu ebe a, ị nwere ike pụọ na 32 na-ahụ taya nke mara mma mara mma ugbu a mgbe ị kpebiri ụdị taya ị nwere ike ịbanye n'ebe ahụ, ị ​​ga-achọ ịmalite iche echiche banyere ụdị taya ị nwere.
Ga-enwe ike ịba ebe ahụ, n'ezie a ga m agwa gị na ị na-efegharị na supposed kwesịrị ịgba ọsọ na taya na-agbajikwa n'ihi na ị chọghị ịgba ọsọ 21C taya na ọkpọkọ n'ime ya ị kụrụ nkume na 120 psi, nke a agaghị adị mma maka onye ọ bụla ịchọrọ ijide n'aka na ị na-agba tube na nnukwu taya na nrụgide dị ala, ikekwe 60 psi n'ihi na ọ ga-enye taya ahụ ntakịrị ngagharị, ọ ga-enwe ike ịkwaga, ya Aga m enye gị ezigbo nsụgharị ka mma na ahụmịhe zuru oke, anyị nọ na Vermont ugbu a ma ndị ahịa a bụ ndị maara ọkwa mmiri siri ike gbadata wee bịakwasị ha kpọmkwem n'ihe m ga-akpọ mgbidi brik, nke a igwe kwụ otu ebe na m nwere ebe a nwere 48 35 n'ihu ma ọ nwere 1028 na azụ, nke bụ oke dịgasị iche iche mgbe m na-agba ịnyịnya, na ihe nwere ike ịbụ na ọtụtụ n'ime gị nwere bụ 5339, ma eleghị anya 1125, nke ọ bụrụ na ị bụ, m ga-eme nnukwu ịrị elu, ụmụ nwoke, ọwa gị, hụla ọhụụ m na m ga-ama mma h siri ike ọ ga - abụ n'ezie ugbọchị ugh na ihe kachasị njọ i nwere ike ime bụ ịpụ ma gbaa ọsọ mgbe ị si n'aka onye ga-eme nke a ọtụtụ, mgbe ụdị gia ndị ahụ adịghị, ọ naghị eme ihe ọchị ọbụla yabụ gaa maka ọtụtụ ebe n'okporo ụzọ gị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime obere gravel ma ha nwere ike ime ka ọ dị gị ka ị nwere ụbọchị mgbatị nke ọtụtụ narị quats ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya n'ihi na ị ga-enupụ obere obere nzuzo ma ọ bụrụ enweghị ihe kwesịrị ekwesị ị na-eyi ọkara mgbe ị na-agba ịnyịnya a ma anyị nwere nnukwu ịrị elu nke ụkwụ m ga-etiku m, mana n'akụkụ nke ọzọ nke nrite ahụ anyị nwere ụfọdụ? mara mma dịkwa steeper dịkwa mma, yabụ anyị biliri ebe a anyị lere anya ebe a ọ bụ ugwu mara mma mara mma niile a dọwara ebe a, mana ihe na-arị elu ugbu a ga-agbadata nnukwu ugwu a ugbu a ma m ga-agwa gị, ị ga-aga jiri nwayọ mgbe ị na-agba ịnyịnya n'okporo ụzọ gị na gravel na taya 28 ruo 32 C, ọ bụrụ na ị kụrụ ọbụna obere okwute ọ nwere ike ịgbawa ma ka njọ, ị nwere ike ofufe ugbu a na n'akụkụ nke ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya gravel ma nwee taya 45d na obere ike ike stance i nwere ike na-a nnukwu nkume dị ka a champ naanị na-aga nsogbu ọ bụla ma n'ezie na ị chọrọ ka agafeghị oke ọsọ gị mkpa ka ị tozuru okè na ị chọrọ itinye ma mkpịsị aka gị na brek azụ gị ibu na ụgbọala jiri nwayọọ m hụrụ ndị ọkwọ ụgbọala na-agbaji mgbago ahụ mgbe mgbe naanị iji pụta na ụlọ abụọ na-apụta. Yabụ ọ bụrụ na ị si n'okporo ụzọ gbawara agbawa na okwute na nkume ụfọdụ ị ga-eji nwayọ nwayọ, hụ echiche ahụ n'anya nke mere nke a bụ igwe kwụ otu ebe Myorbeaorca ugbu a enwere m taya 32 C Pirellislick na ya ma ọ bụrụ na ị chere na ị ga-ewere igwe kwụ otu ebe gị ma tinye otu bọtịnụ ole na ole ma ọ bụ ọkara ọkara ebe a, ọ gaghị adị mma ịchọrọ n'ezie 100% taya na-enweghị atụ nke a bụ taya na-ezighi ezi maka igwe na-ezighị ezi n'ụzọ ọ bụla ị ga-esi jiri taya na-agba agba ugbu a ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnya nnukwu ụbọchị ahịhịa n'ihi na anyị tọgbọrọ n'efu nke ukwuu wee tụlee ya dị ka ebe ọzọ ị ga-esi were ngwugwu etiti n'ihu ma ọ bụ n'okpuru ebe a nnukwu akpa na azụ yana mmiri ọzọ na azụ ma ọ bụ onye na-ejide karama nke atọ nke etinyere ebe a na oche oche ma ọ bụ ọbụna ebe a n'okpuru Mpaghara a bụ ihe ọma dị mma iji gbakwunye igwe kwụ otu ebe nke ị ga-eji na gravel graves ụbọchị ekwesighi ikwu kama m ga-ekwu ya n'agbanyeghị na ị na-ahụ ihe mgbe ị nọ ụdị ọrụ a na dịka ọkachamara ruo ogologo oge. Ahụla m ndị mmadụ n'okporo ámá gravel nke nwere psi 120 psi 21cdisc wiil tri-kwuru hyper-lightclimbing wiil, ikekwe otu puku grams na ngụkọta, akpan rapaara na ya naanị maka ịrị elu ugwu ndị a bụ ihe ndị ahụ jigidere n'okporo ụzọ anyị anaghị Achọrọ ịhụ ihe a na gravel anyị achọghị ka onye ọ bụla mebie Julie, ị ga-akpachara anya ma maa, ọ bụrụ na ịhọrọ eriri carbon carbon, nweta ihe siri ike ma hazie maka ule ndị ị na-eme atụmatụ iji ya.
Anyị nọ ebe a, nke a bụ oge ikpeazụ, yabụ? ka anyị kwuo maka geometry n'okporo ụzọ, ugbu a ihe gbasara okporo ụzọ geometry bụ na o kwesiri ibu oke ọsọ ọsọ na asphalt na nke ahụ pụtara na ị ga-enwe nnukwu ụkwụ ụzọ ụkwụ, ị ga-adị ogologo oge, dị ka agwọ nke na-eme ihe ahụ. Ala mara mma asphalt Ugbu a na gravel igwe kwụ otu ebe ị ga-abụ ihe ziri ezi, ogwe aka gị ga-abụ ihe ike ike, ma ị ga-enwe a otutu ihe akara nke igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụrụ na ị nọ n'okporo ụzọ gị b ike na ị na-kewapụrụ ogologo na otú, ị gaghị enweta nke ahụ Nwee ikike ịgbanwe ahụ gị ma ọ bụrụ na ị kụrụ olulu ma ọ bụ nkume ma ọ bụ ihe na-ezighi ezi ka ị chee echiche banyere ya na nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa m ga-ekwu n'oge isiokwu a mgbe m na-eme atụmatụ routezọ gị, chọọ gị gravel ụzọ echedoro nke ọma Na-agagharị ugbu a onye anyị na ya nọ ebe a na GCN nwere ike inyere gị aka ịchọ ụdị ụzọ a, mana nke a bụ ụzọ dị mma echekwara nke ọma nke obodo na-adọta ha na igwe kwa afọ. na-eji ire ụtọ elu, hoo haa, dị mma karịa ọtụtụ nke paved okporo ụzọ dị na Mytown, Massachusetts, mana nke ahụ bụ maka isiokwu ọzọ kwa, ime ihe n'eziokwu, mana ihe kachasị mkpa Ihe niile ị nwere ike ime bụ ijide n'aka na ị gaghị agafe ịnya ịnyịnya n'okporo ụzọ gị-nke ụzọ igwe anọ na-adịghị ọcha, ATVs , ibu jeep, na ihe ndi di otua abughi ebe di nma maka igwe uzo gi, nke na ewetara m uzo ozo, ya mere mgbe m na agwa ndi enyi m obula ndi no n’ogo di elu mgbe ha biara ibanye na gravel, ha ga-adị mma na nke ahụ. Anyị nwere ọtụtụ agbụrụ na ihe omume na ihe ndị anyị mere ebe anyị dere anyịnya anyị na-agba ọsọ na gravel na mbụ, enweghị nsogbu, mana gịnị ma ọ bụrụ na m jụọ ihe? si ohuru enyi m nwoke nke m na-eme ugbua ndi enyi, ma oburu na ha ga eso m na-agba ịnyịnya ígwè ha na gravel, ha ga-abụ ndị freaked si, yabụ ihe ị chọrọ ime, kpọọ ụfọdụ ndị enyi ma ọ bụrụ na ị nwere ike ikwu ya hey achọrọ m ịnya igwe kwụ otu ebe n'okporo gravel ọhụrụ ma tupu ị mara ya ebe ahụ na-aga ịta nri, ị nwere uwe elu ma ị nwere akpa akwa na obere uwe gị ma ị ga-eme ya ugbu a wee gbawaa ugbu a. ihe a nile di nma, mana gbalịsie ike. Ihe kachasị mkpa maka gị bụ na ịnwere igwe kwụ otu ebe maka ụgbọ oloko kwesịrị ekwesị.
Egbula igwe kwụ otu ebe gị na ihe emere maka gravel ma agbagola igwe kwụ otu ebe na ihe emere maka ịgba igwe na ugwu anyị nwere ike ghara ịgba ịnyịnya igwe m n'okporo ụzọ, ọ dị ka ọ bụghị na ọtụtụ fun Guys that good, abụọ ude jupụta pizzas akpatre see pizzas na-eche na m nwere ike na-eche na-ekele unu ụmụ okorobịa na-ekiri na m, hapụ a okwu n'okpuru ka anyị mara ihe ị na-eche mgbe ị na-esi n'ụzọ gị bike na dere oké gravel wee pụọ na ya na ole ị na-agbanye ókè nke m bụ, ọ bụ oge Pete, ọ na-amalite
Martyn Ashton nwere GMBN?
Okporo ụzọA na-ahazi ịnyịnya ígwè iji na-agba ọsọ ọsọ na paịlị dị larịị. Ha nwere ezigbo taya, nke na-egbu egbu na 'dobe' aka, ma enwere ike iji ya na-okporo ụzọọduọ. Ha na-adịkarị mfe karịa ụdị igwe ndị ọzọ. Enwere ike ịnya ha n’elu pavedụzọ ụkwụ, ma ọtụtụ mmadụ na-ahụ ha ahụ erughị ala ma na-akwụsighị ike na enweghị akwaụzọ ụkwụ.
Kedụ ka m ga - esi akụ ịnyịnya ígwè m?
Ọwa ahụ bụ nke ndị ama ama ama ama ama ama ama ama na ụwa gụnyere, gụnyere: akụkọ ịgba ịnyịnya igwe ugwu na kpakpando ụzọ Bike PartyMartyn Ashton; mbụ UK Gravity Enduro onye mmeri na mbụ World Cup downhill racer, Neil 'The Don' Donoghue; na unyi elu na slopestyle pro Blake Samson.
YeahOh ihe na-eme umu nwoke a nabatara na Newrock Home Vlog ma taa a ga m egosi gi aghụghọ ise di nkpa i nwere ike iji igwe kwụ otu ebe wee mee ka m ghara inye gị nkọwa zuru ezu banyere etu esi eme aghụghọ ahụ mana m ga-enye gị a nkọwa dị mkpirikpi na ụdị aghụghọ ọ bụla i kwesịrị ịmalite ka anyị bido na nke mbụ ọ bụ oge ole na ole ka anyị nyere onyinye ka anyị na-enye uwe mwụda ọhụrụ a na okpu agha na otu esi enweta ya, nọnyere anyị ma ị ga- hụ tupu anyị ebido? Anyị kwesịrị ịgbanye ABS, ọ nwere ike ọ gaghị ada dịka ezi uche, mana ọ ga - eme ka aghụghọ anyị dị nchebe na Machị, ka anyị kwuo na ọ bụghị iwu, nke dị mma maka ịse oge ma ọ bụ ịpị na peeji ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya. ihe anyị ga - eme bụ ụkwụ aka nri azụ na aka ekpe wee ụkwụ aka ekpe gbadata n'ala ọgịrịga dị ala n'oche ma ị gbakwunye ụkwụ nke abụọ ma anyị sere na ị bụ ihe dịka 30km / h na mbu gia, dị nnọọ ezu ọsọ otú i nwere ike slide na ị na-adịghị kwa ngwa ngwa na adịghị kwa ngwa ngwa ịkwụsị gị ipigide ya na ị na-azụ na igwe kwụ otu ebe, n'aka na i nwere ike ime na mgbe ị na-agba ịnyịnya ma na-ewe a bit nke omume otú ị na-enwe mmetụta maka otu ị ga-esi laghachi na igwe kwụ otu ebe na-ejikarị ụkwụ m na-adaghachi azụ na igwe kwụ otu ebe ma ọ dị mma usoro ọzọ bụ superman n'ezie usoro kachasị mfe, na ị nwere ike ịme igwe kwụ otu ebe na ọ bụ ụzọ aghụghọ zuru oke iji debe gị ndị enyi bịara nwee obi ụtọ ma nwee foto dị mma maka instagram, ọ dị mma ka anyị mee otu efe efe, echere m na m nwere ike ifegharị. dị ka ezigbo nwa agbọghọ arahụ na ọ bụ aghụghọ nke na-atọ ụtọ mana na-ewute bọọlụ gị ọfụma ekele Rickthe Ambrose na-ere ọkụ ụkwụ abụọ na ala dị ka uru nke a bụ ọkacha mmasị m ngwa ngwa oh ee ndị folks nke ahụ bụ ohsorry na ị masịrị ntutu ntutu ọhụrụ a oh nke ahụ bụ Na your roller days it's gutsorry I had wrong you say hairdresser Amaara m ihe mere o ji nweta bundesliga ịkpụ ntutu dị ka nke ọma dị ka ọkụ abụọ ụkwụ nkume Ọ bụ n'ezie otú m si malite na-ewere ndị mbụ nzọụkwụ n'ime a Rolling oké ọkụ n'oge ahụ, Ọ bụ ihe bụ isi ihe na-amụta ma ụkwụ ala, ahụ dị n'elu n'ihu ka ị gbanwee ọcha na ihu ihu ị gaghị efunahụ mgbochi ahụ na-aga n'ihu taya troll, kụfụ ya ma gbaa ọzọ otu n'ime aghụghọ kachasị mfe ọ dị ntakịrị ọnụ n'ihi azụ taya ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmasị ndị enyi gị na ike ọgwụgwụ bụ n'ezie ihe mbụ ị ga-eme tupu ọkụ ọkụ na-agba ọsọ, na mgbe ị mụtara ị nwere ike ịmalite egwuregwu ahụ ma soro ndị enyi gị nwee ike ịda mbà mgbe ị na-edozi ya n igwe kwụ otu ebe na ị na-achọghị ịmụta taa adịghị todayokay ndị mmadụ dobe na ikwu n'okpuru ma ọ bụrụ na Dominic na otu nke na-esote vlogs kwesịrị ịmụta a oké ọkụ ga-amasị m na-akụziri ya a aghụghọ dịkwa mma mgbe anyị na-atụgharị 50 wee hapụ a ole na ole kwuru n'okpuru hashtag Dominic's Burnout Challenge Dominic ga-amụta ọkụ ọkụ m ga-ahụ n'anya ka ha hụ ka ha na-ehichapụ ezé ha gịnị ka ị hụrụ iji mee ka onyinye zuru oke, ọ bụ ya mere ha ji akwụ ọtụtụ nde dollar iji mee ụfọdụ ọkụ ọkụ donuts na-anọgide na-eto anwụrụ ọkụ nke ahụ bụ ọrụ m nke mere ha ji Kpọọ m oké ike ọgwụgwụ SteveSteve Burnout no Heather Circle Ridens mara mma ọchị aghụghọ n’izu sochirinụ ma ị naghị eji aka gị eme ihe n’ihi na ị ga-ahụ nke ọma na ị na-atụgharị igwe kwụ otu ebe n’etiti ụkwụ gị na igwe kwụ otu ebe ya na ahụ gị gaa n’aka ekpe ma na-agagharị n’aka nri ma ghara iji aka gị zuru ike naanị ị nwere ike ịmalite, naanị ịga ije ozugbo iji nwee mmetụta otu ọ na-adị na-enweghị aka, nwalee ya na mgbatị dị elu ugbu a m na-eji ngwa 3rd na Duke390 ngwa ngwa ị na-aga ọ dị mfe ọ bụ idobe gị itule m n'ezie iji aghụghọ a na ihe ngosi m yana iwepụ aka m na mgbapụta mmebi m na-enweta na nkeji iri abụọ ahụ, ọ na-atọkwa ha ụtọ Ìgwè mmadụ na ee ndị mmadụ hụrụ ya n'anya ọ dị mma chere chere na m bụ usoro abụọ ihe ị ga-eme ugbu a na-ekiri peeji facebook gi ma kwado anyi ka otutu ndi mmadu puta ihu ya en na nke abuo bu n’ezie, ebe okpu a bu okpu nke ato m, o buruworu nnukwu nrọ nke m n’inwe okpu nke m, ya mere n’oge a achoro m inu na nrọ gị na otu ị chọrọ isi mezuo ha, dee n'okpuru ihe a, m ga-ahọrọ ọkacha mmasị m nke ọma na nke ahụ ma enwere m obi anụrị ịnụ uwe mwụda gị banyere aghụghọ ọzọ na aghụghọ ikpeazụ jiri igwe kwụ otu ebe gị mgbe ị nọ n'ọnọdụ siri ike ma ọ bụ otu nna bịara ma ebe ị ga-atụgharị ohere pere mpe nke mere na ọ bụ usoro dị mkpa mana aga m egosi gị otu esi eji nka ahụ na oge ọkụ ọkụ. Powerslide dị ezigbo mkpa ABS dị ka aghụghọ niile maka mgbe ịnweghị ABS, ị nweghị ike bl Ock taya azụ ma ị nweghị ike ịme Slide Ike, yabụ chee na nke a bụ akụkụ nkedo n'ime ọhịa ma ọ bụ n'okporo ụzọ na Si e kwesịrị ịtụgharị You nweghị ohere buru ibu nke ị na - enweghị ike tụgharịa ya mere na ị ga-eme ike ịtụgharị ma tụgharịa nke ọma. Ikwesiri ime ihe atọ n'otu oge, buru ụzọ kpochie taya azụ, pịa ụkwụ aka ekpe nke abụọ wee gbadaa nke atọ, ị na-adabere igwe kwụ otu ebe na nkuku ma nke a bụ otu ị ga - esi Powerslide wee tụgharịa ka nri wee ghara inweta ekpochi n'ụzọ dị mfe m chọrọ n'etiti ịgbanwe ụgbọ ala ndị ahụ ma ị nwere ájá yabụ na ị ga-akpachara anya ma ọ bụrụ na ị nwere obere okwute ma ọ bụ ájá n'ihu gị, mafere usoro a n'ihi na ị ga-akụda na ị chọghị ime nke ahụ Dominick Reis ya mere na ọ bụ maka oge a amanyela onwe gị ịsị na ị ga - eme ụfọdụ aghụghọ n’ọdị n’ihu ugbu a ị ga - amụta ụfọdụ aghụghọ naanị m ga - agbago ịnyịnya igwe naanị ị chọrọ igwe kwụ otu ebe ugbu a ọ ka mma na-eche ndị hashtags echefula na m chọrọ ịkụziri dominic otu esi ere ọkụ, dịkwa mma daalụ, gbaa Steve iwe maka ịpụta. Ọ bụ ihe ọ aụ dị ukwuu izute ya.N'oge a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta aghụghọ ndị a, gaa ebe dị nso, na ọ dị mma, na ọ bụghị n'okporo ámá, na e nwere ọtụtụ okporo ụzọ.
Yiri uwe nchebe nke ka dị mfe mana ha nwere ike ịdị egwu, ị nwere ike ịdaba M mere ihe a niile Trickson a igwe kwụ otu ebe na mkpisi m 390 naanị nwetara aka na sprockets ihe dị iche mana ha anaghị eme ihe dị iche ma ọ bụrụ na ị bụ Dominic na-eme aghụghọ ndị a ka m ga-asị na ọ bụ maka vlog a, ee ọ na-agba ọchịchịrị yana maka okpu agha ị maara ihe ị ga-eme, anyị na-atụ anya nrọ gị, ka anyị tinye ụfọdụ ihe n'okpuru wee hụ gị n'izu na-abịa.
Martyn Ashton ọ lụrụ nwanyị?
Ọọdọotu nwanyị aha ya bụ Lisa ma nwee nwa nwoke.
Ejiri igwe ajịrịja nkume dị ka igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ?
Azịza: You nwere ike maa iji agravel igwe kwụ otu ebenwee aokporo ụzọ. You'll ka ga-enweta ọtụtụ gia maka ọtụtụokporo ụzọna-agba ịnyịnya, ma ị ga-enweghị nnọọ ezu elu Kwadobe n'ihi na mgbe ndị gbapụrụ ọsọ ọkọkpọhi nnọọngwa ngwa, dị ka 26 mph ruo 30 mph ma ọ bụỌsọ ọsọ. Probably nwere ike ị na-atụgharị, n'ihi na ịnweghị ike ịdangwa ngwaezu.
O siri ike igba igwe n’okporo uzo?
Okporo ụzọ anyịnya igwedị ngwa ma dị mfe iji ụkwụ na-aga n'okporo ụzọ. Ha adabaghị nke ọma maka ịrụ ọrụ naokporo ụzọ. Ugwuanyịnya igwedịSiri nnukwu ikeka ị ga-eji ụkwụ na ụkwụ nwayọ nwayọ. Ma ha nwere cushynọkwasi, onye ziri ezina-agba ịnyịnyaỌnọdụ, ma nwee ike ịgafe n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ ebe dị iche iche.
Kedu ihe a na-akpọ igwe kwụ otu ebe?
Ọgba tum tumịnya ịnyịnya, nke a na-akpọkarịna-agbasi ike, bụọgba tum tumegwuregwu e ji marastuntsmetụtara ntụgharị nke acrobatic nkeọgba tum tumna mgbe ụfọdụ onye na-agba ịnyịnya. Mgbapụ nkịtị nastuntịnya ịnyịnya gụnyere whei, ebe nkwụsị, na ọkụ ọkụ. Egwuregwuanyịnya igweabụrụla ihe a na-ahụkarị makastunts.
Kedu ka igwe ịgba ajịrịja si jiri nwayọọ karịa ịnyịnya igwe?
Mgbe kilomita 2200 gacharagravel igwe kwụ otu ebeafọ a, m nkeziososodị 19.3 MPH ma e jiri ya tụnyere nkeziososonke 20.3 MPH maka 5000 kilomita afọ gara aga na ncharaokporo ụzọ. Ya mere ee ya a akaJiri NwayọọOtú ọ dị, M na-na na mere a sub - 5 hour Imperial narị afọ nagravel igwe kwụ otu ebe, yabụ na agaghị m ekwu na ọ bụjiri nwayọ...Ọnwa Ise 28, 2020
Granya gravel siri ike karịa okporo ụzọ?
Ajịrịja nkumeanyịnya igwe yiriokporo ụzọigwe kwụ otu ebe ma nwee sara mbara taya, diski breeki na ogwe aka ndị ọzọ maka ọtụtụ nhọrọ ijide. “Ọ dị ọtụtụsiri ike karịa100 kilomita na aokporo ụzọ. 'Ajịrịja ajịrịja nkumebụkwaruphu ẹphekarịa ịgba ọsọ n'okporo ụzọya mere ike na agagharị na-abanye n'ezie. “Ahụ gị dị elu na-ewere iti ihe karịa,” MaazịJul 7 Dec 2019
Ebee ka Okporo ụzọ na ịnyịnya ígwè na-esite?
na ụdị ala niile. Nabata na okporo ụzọ na ọnwụnwa guzosiri ike na 1987, okporo ụzọ na ikpe na-esite na ezinụlọ nwere ntọala sitere na mkpokọta ịnyịnya ígwè nke na-agafe ọgbọ atọ. Na 2007, ha rịrị elu ma banye n'otu oghere sara mbara n'akụkụ nke ọzọ nke Barnsley, na Barugh Green.
Kedu ihe ị ga-eme na ịnwale ịnyịnya ígwè n'okporo ụzọ?
Enweghị m mmasị na ya! You ga - eme ya n'ofè ngwụcha egwuregwu niile na - echere gị n'egwuregwu egwuregwu a dị egwu? Wụkwasị na igwe kwụ otu ebe gị ma dịrị njikere ịkụ egwu mbụ. ’Ll ga-ezere Dodge gbawara mines mgbe ị na-apụ apụ ramp na ibiaghachi gafee swinging nyiwe.
Ego ole ka ịnwale ịnwale oge na-echekwa?
Nwere ike ịzụta ụzọ abụọ ndị a maka ihe dị ka £ 100. Ego a bara uru bara uru gosipụtara na ọ gara nke ọma, na-echekwa 66 watts - yana ịchekwa 5min 20s na ọnọdụ 'elu' ụzọ igwe kwụ otu ebe, na 2min 17s ma e jiri ya tụnyere ọnọdụ 'tụlee' kachasị ọsọ.